News Collection: यस्ता छन् प्रचण्डको आम्दानीका स्रोतहरु
यस्ता छन् प्रचण्डको आम्दानीका स्रोतहरु
काठमाडौं । शोषित, पीडित, मजदुर, किसान र गरिव जनताको मुक्ति घोषणा गरी नयाँ नेपाल बनाउने उद्देश्यका साथ शुरु भएको माओवादी रणनीति अन्तत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ठगी खाने भाँडोका रुपमा रुपान्तरित भएको छ। शोषणरहित समतामूलक समाज निर्माणका लागि लाखौं युवाहरूको सपना र भविश्य चौपट पारेर अध्यक्ष दाहाल खर्वपति बन्न सफल भएका छन्। गरिव जनताको हक हितका लागि राजनीति शुरु गरेका दाहालले काला व्यापारी, तस्कर र दुई नम्बरीसँग हिमचिम बढाएका छन्। रक्तचन्दन तस्करी, यार्सागुम्वा, कर्मचारी सरुवा बढुवा, नक्कली लडाकुको तलव भत्ता अध्यक्ष दाहालका कमाईका स्रोत हुन्।
व्यापारिक साझेदार अजय सुमार्गी(पराजुली) मार्फत अध्यक्ष दाहालले राजधानीमा थुपै्र व्यापारीक कम्प्लेक्स, घरजग्गा कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन्। नयाँ बानेश्वरमा अध्यक्ष दाहालका पिताको नाममा मुक्ति टावर, माइतीघरमा करोडौं मूल्य पर्ने फर्निसिङ हाउस लगायत थुपै्र भवन दाहालले अवैध कमाई मार्फत जोड्न सफल भएका छन्। राजधानीभित्र धेरै ठाउँमा जग्गा प्लटिङ गरी दाहालले अवैध कमाई सुरक्षित गरिरहेको माओवादी स्रोत बताउँछ। अध्यक्ष दाहालका दाहिने हात मानिने कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, हरिवोल गजुरेल आदिले दाहालका नाममा व्यापारीक 'डिल' गर्ने गरेका छन्। स्मरण रहोस् महरा अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रकम लिने अभियुक्त पनि हुन्। अध्यक्ष दाहालले स्वदेशका थुपै्र क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट बाँकी रहेको रकम विदेश समेत पुर्याहएको अनुमान गरिएको छ। बेला–बेलामा अध्यक्ष दाहालले शंकास्पद रुपमा गर्ने विदेश भ्रमण सोही उद्देश्यका लागि हुने गरेको समेत बुझिएको छ।
यसैबीच गत शुक्रबारदेखि शुरु भएको अवकाश रोज्ने लडाकुलाई आधा रकम दिएर घर फिर्ता पठाउन थालिएको छ। लडाकुले लिएको चेक र परिचयपत्र अध्यक्ष दाहालको निर्देशनमा कमाण्डरले कब्जा गर्नुले पनि माओवादी पार्टीभित्र आर्थिक अपराध कुन हदसम्म मौलाएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। नक्कली लडाकुको तलबभत्ताबाट मात्रै माओवादीले दुई अर्वभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट लिइसकेको छ। त्यसैगरी ०६३ साल यता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा बाहेक उनीहरू निरन्तर सरकारमा छन्। सरकारमा रहँदा माओवादीले भ्रष्टाचारीलाई संस्थागत गर्न अन्य सबै दललाई उछिनेको छ। द्वन्द्वकालमा बैंक लुटेको, कब्जा सम्पत्ति आदिबाट पनि माओवादीले नियमित कमाई गरिरहेको छ। सयौं ठाउँमा जग्गाधनीको जग्गा कब्जा गरी माओवादी नै कुद बुझ्ने गरेको भेटिएको छ। त्यही अबैध कारोबारलाई बैधानिकता दिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत पुस २८ गते द्वन्द्वकालका घरजग्गाका लिखितलाई मान्यता दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराएका थिए। सोहि विषयप्रति विरोध जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले गरेको संसद् अवरोध अझै जारी छ। अध्यक्ष दाहालकै जोडबलमा उक्त निर्णय गरिएको हुनाले प्रम भट्टराईले त्यस निर्णय फिर्ता लिन सकेका छैनन्। दाहालका आय आर्जनका थुपै्र स्रँेतमध्ये द्वन्द्वकालको कब्जा सम्पत्ति पनि एक हो।
हालसालै माओवादी अध्यक्ष्ँ दाहाल नयाँबजारबाट लाजिम्पाट 'डेरा' सरेका छन्। लाजिम्पाटको सुविधा सम्पन्न घर एक लाख तीन हजारमा भाडामा लिइएको विज्ञप्ति नै निकालेर सार्वजनिक गरिएको छ। तर १० वटा सम्म गाडी पार्किङ्ग गर्न मिल्ने लाजिम्पाटको सुविधासम्पन्न घर एक लाख तीन हजार भाडामा पाइने कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यसमाथि दाहालको सुरक्षामा खटिएका पाँच दर्जन सुरक्षाकर्मीका लागि बस्ने छुट्टै सानो घर समेतको बहाल त्यहि देखाइएको छ। घर भाडा सम्बन्धि विज्ञप्तिमा आउनु पूर्व लाजिम्पाटको घर खरिद नै गरिएको व्यापक चर्चा चल्यो। अन्य थुपै्र प्रश्नप्रति मौन रहने दाहालले घरभाडा सम्बन्धि विषयमा भने तत्कालै विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्नुले 'चोरको खुट्टा काट' भन्दा दाहालले खुट्टा उचालेको अर्थमा लिन थालिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक ४२ हजार रहेको छ तर गरिव किसान, शोषित, पीडितको नाईके हुँ भन्ने दाहालले मासिक एक लाख तीन हजार घरभाडा मात्रै तिर्छन्। अब उनलाई गरिव जनताको नेता मान्ने कि तस्कर वा काला व्यापारिका नाइके?
माओवादीले आदर्श मान्ने गरेका रुसका तत्कालिन नेता लेनिनको राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदा समेत दुईवटा भन्दा बढी सुट रहेनछ। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि थप दुईवटा सुट सिउन आग्रह गर्दा लेनिनले अस्वीकार गर्दै जनताको जीवनस्तर सँगसँगै आफ्नो पनि जीवनस्तर उकास्ने बताएछन्। त्यसपछि पोलिटव्यूरो बैठक नै डाकेर लेनिनलाई नयाँ सुट सिलाउने निर्णय गरिएको थियो भने दिनहुँ नयाँ सुट र गेटअपमा देखिने माओवादी अध्यक्ष दाहालको रहनसहन र खानपान भने सामान्तको भन्दा फरक छैन। दिनहुँ महँगो विदेशी मदिरा सेवन गर्नुपर्ने, पार्टी विवादको समाधान खोज्न एवम् मनोरञ्ननका लागि महँगा रिसोर्ट जाने कुलतमा दाहाल फसेका छन्। माओवादी निकट स्रोत भन्छ–'नायिका रेखा थापासँग नाच्ने, खानपान, रहनसहन एवम् सरसंगतकै कारण दाहालपुत्र प्रकाशले केटी फेर्ने र दिउसै मदिराले झुम हुने शिक्षा पाएका हुन्। घर भाडामा मात्रै मासिक एक लाख भन्दा बढी खर्च गर्ने दाहालले अन्य शिर्षकमा कति खर्च गर्दा हुन? त्यो खर्चको स्रोत के हो? त्यो भने खुलासा भएका छैनन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले अवकाश रोजेका लडाकुले पाउने रकम आधा पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने निर्देशन लडाकु कमाण्डरलाई दिएका छन्। सोही निर्देशनकै कारण नवलपरासीस्थित शिविरमा लडाकु र कमाण्डरबीच कुटपिट समेत भएको थियो। परिचयपत्र र चेक कमाण्डरले लिन खोजेपछि आइतबार नवलपरासिमा उक्त घटना भएको हो। अवकाश प्राप्त लडाकुले पाउने रकम पार्टीले लिन खोजेको गुनासो आफू समक्ष आएको लडाकु समायोजन विषेश समिति सदस्य एवम् कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले आईतबार सार्वजनिक गरिदिएका छन्। अनमिनले प्रमाणीत गरेका लडाकुले पाउने तलव भत्तामा पनि माओवादीले निश्चित प्रतिशत 'लामो हात' गर्दै आएको छ। अनमिनले अयोग्य प्रमाणित गरेका, युद्धकालमा घाइते भएका, वाइसीएलमा गएका कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि निश्चित हिस्सा लडाकुको रकमबाट लिएको माओवादीले नै स्वीकार गर्दै आएको छ। माओवादी नामक कारणखाना अध्यक्ष दाहालका लागि नोट छाप्ने मेसिन सरह भएको छ। एकातिर पार्टीका दाहाल पक्ष मालामाल छ भने अर्कोतिर बैद्य पक्ष आफूलाई आर्थिक नाकावन्दी गरेको गुनासो गर्दै आएको छ।
दक्षिण एशियाकै माओवादी सबैभन्दा धनी दलको रुपमा रहेको थुपै्र टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्। खुला राजनीतिमा आएको केही समयमै कोटेश्वर पेरिसडाँडामा माओवादीले तीन करोड रुपैयाँमा भवन खरिद गर्यो्। हाल पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त भवन चलनचल्तीको मूल्य भन्दा दशौं गुणा कम मूल्यमा खरिद गरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी माओवादीका राज्यसमिति स्तरका कार्यकर्ता समेतले निजी गाडि चढिरहेका छन्। त्यसको पनि स्रोत भने खुलाइएको छैन। सम्पत्ति थुपार्न माओवादी कति हदसम्म अपराध गर्न तयार हुन्छ भन्ने त कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठ हत्या काण्डले नै पुष्टि भइसकेको छ। राजधानी र नगरपालिका भित्रका ठूला–ठूला भवन माओवादी नेताका आफन्तका नाममा रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ। त्यसैगरी जग्गा प्लटिङमा पनि माओवादी नेता नै अग्रमोर्चामा छन्। ठूला ठेक्कापट्टामा पनि माओवादीकै बोलवाला छ। ठेक्कापट्टा हात पार्न वाइसीएल हातहतियारसहित गुण्डागर्दीमा उत्रने गरेका थुप्रै घटना भइसकेका छन्। माओवादी निकट एक बुद्धिजीवी भन्छन्–'सुरा, सुन्दरी र सम्पत्ति अर्थात तीन 'स' माओवादी अध्यक्ष दाहालका कमजोरी हुन्। सुन्दरीका हकमा रेखा थापासँग नाचेर आफ्नो कुण्ठा सार्वजनिक गरे पनि कुनै स्क्याण्डल भने सार्वजनिक भएको छैन। तर सम्पत्ति र सुराका हकमा भने दाहालले रेकर्ड नै कामय गरेको स्रोतको दावी छ।' मदिरा सेवनमा अम्मली दाहालले एमाले नेता इश्वर पोखरेलको घरमा होसै गुम्नेगरी पिउँदा चस्मा नै विर्सिएको घटना छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मदिरा सेवनमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि उछिनेको केही समयअघि बताएका थिए। एक थोपा पानी नहाली दशौं पेग मदिरा पचाउने दाहालको क्षमताको ठूलै चर्चा हुने गरेको छ। आफ्नो अवैध सम्पत्ति व्यापारिक साझेदारले हडप्ने चिन्तामा दाहाल मदिराको दुर्व्यसनी बन्दै गएको समेत थाहा भएको छ। दिनको तीन पटकसम्म कुरा फेर्ने, आफ्नो पार्टीमा एउटा र सर्वदलीय बैठकमा छुट्टै प्रकारको मन्तव्य दिने, छ–छ महिनामा पार्टीको कार्यनीति बदलिरहने अस्वभाविक व्यवहार दाहालले देखाँउँदै आएका छन्। सम्पत्ति सम्बन्धि तनावका कारण दाहालले त्यस्तो व्यवहार देखाउने गरेको हुन सक्ने माओवादीभित्रै चर्चा छ।
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले लिएको गाडि र सुरक्षाकर्मी अवैध घोषणा गरिदियो। त्यसपछि सबै पूर्व प्रमहरूले गाडि र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिदिए तर दाहालले भने गाडि मात्रै फिर्ता गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले सुरक्षामा चुनौति रहेको बताउँदै सुरक्षाकर्मी फिर्ता नगरेको बताएका थिए। नयाँ बजारबाट लाजिम्पाट 'डेरा' सर्नुमा पनि दाहालले सुरक्षाकै कारण देखाएका छन्। तर आफूमाथि असुरक्षा कोबाट भइरहेको छ भन्ने चाहि दाहालले खुलाउन सकेका छैनन्। हालै सम्पत्तिकै कारण सशस्त्रका डीआईजी रञ्जन कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरे। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठ सम्पत्तिकै कारण माओवादीबाट मारिए। त्यही भूतले अध्यक्ष दाहाललाई सताइरहेको हुनसक्छ। माओवादीको बैद्य पक्षले बारम्बार पार्टीको हिसाव किताव अपारदर्शी रहेको र अध्यक्ष दाहालले व्यक्तिगत हैसियतमा पार्टीकोष चलाएको बताएको छ। यसरी माओवादी नामक कारखानाबाट अध्यक्ष दाहाल नव सामन्त बन्न सफल भएका छन्।